friend | HoLOLo....DiLoLO
နေရာသစ်တစ်ခုရောက်တိုင်း တော်ရုံနေသားမကျနိုင်တာကလည်း အကျင့်ဆိုးဆိုးတစ်ခု။ အလုပ်ခွင်ဆိုပေမယ့် အရာအားလုံးက ထူထောင်ခါစမို့လို့ ပုံသေအရာမရှိသေး။ မနက် ၈နာရီကစ စာတွေသင်လိုက်၊ သင်တန်းရှိရာပြေးတက်လိုက်၊ စည်းမျဉ်းတွေလေ့လာလိုက်နဲ့ ညနေ၅နာရီဆို အိမ်ပြန်။ လေ့ကျင့်ရေးတွေနဲ့ချည်း တနေကုန်တော့ အလုပ်ခွင်ထက် စာသင်ကျောင်းနဲ့သာ ပိုတူနေပါသေးတယ်။ နေသားမကျတကျ၊ အချင်းချင်းကလည်း ရင်းနှီးကာစ၊ အသွားအပြန်လမ်းချင်းတူတဲ့ တချို့တလေနဲ့ ကားပေါ်ဆုံတော့လည်း အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရင်း စကားစမြည်ပေါ့။
အသင်းတွေ အသီးသီးခွဲထားတဲ့အတိုင်း နေရတော့ ကျွန်မက ခပ်အေးအေး တရုတ်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသင်းမှာ အသင်းသားတစ်ယောက်။ လူတွေအကုန်က ခပ်အေးအေး။ အဆင်ပြေပြေပါပဲ။ အပြန်လမ်းမှာ အတူတူဆုံနေကြ ကောင်မလေးကတော့ ကျွန်မထက် နံပါတ်တစ်ခုငယ်တဲ့ အသင်းက အသင်းသား။ သူ့အသင်းအကြောင်း ခဏခဏ ပြောပြောပြနေတဲ့အထဲ “အစ်မ သိလား.. အဲတစ်ယောက်ကလေ.. ပြောတယ်.. သူ့အနားသိပ်မကပ်နဲ့.. သူ ပူအိုက်တယ်တဲ့.. ခပ်ဝေးဝေးထိုင်ပါတဲ့.. ဘယ်သူက ကပ်ချင်မလဲ.. နေရာတွေက ဒီလိုပဲ ကပ်နေတာကိုနော်.. နောက် ရေသောက်ရင်လည်းလေ. သူ့ခွက်နဲ့သူ.. သူ့ထမင်းချိုင့်ကိုဆို လက်နဲ့ထိတာတောင် မကြိုက်တဲ့ပုံ..” စသဖြင့်။ ကျွန်မကတော့ ရယ်ချင်ပက်ကျိ နားထောင်ရင်း “အင်း.. ကိုကြီးကျယ် နေမှာပေါ့” စသဖြင့်။ သူပြောတဲ့ ကောင်လေးကိုလည်း သတိထားမိသွားတယ်။
နောက်တစ်လလောက်အကြာ အသင်းတွေပြန်ခွဲတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီကောင်လေးရှိတဲ့အသင်းထဲ ကောက်ကာငင်ကာ ရောက်လေသတည်းပေါ့။ အသင်းခေါင်းဆောင် အစ်ကိုကြီးကြည့်ရတာလည်း ဆူမယ့်ပုံ။ ဂွကျကျလူတွေလည်း ရှိမယ့်အသင်း။ စိတ်ပိန်လိုက်တာ စိတ်ပိန်လိုက်တာ ဆိုပြီး စိတ်ထဲ တဖျစ်တောက်တောက်ပေါ့။ ကံဆိုးပြီထင်ရင် ဆက်တိုက်ဆိုးသလို နေရာချတော့လည်း ဂွကျကျလူဘေး ထိုင်ရတယ်။ ရှေးကကြားဖူးပြီးသား စကားရှိလေတော့ သူ့အနားကပ်မိတယ် မဖြစ်အောင် ကိုယ်ကိုတတ်နိုင်သမျှ ချုံ့ထားရသေးတယ်။ အဲဒီကောင်လေးကလည်း အကောင်ကြီးကြီး၊ ထိုင်ရင်လည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ထိုင်လေတော့ ကျွန်မမှာ သူ ကျယ်ကျယ်ထိုင်သလောက် ကျုံ့ကျုံ့သွားရတယ်။ အဲလိုနဲ့ အသင်းတစ်ခုတည်း ဆိုရာကနေစ၊ နည်းနည်းချင်းစီ သူ့အကြောင်းသိသိလာတယ်။ Team Wrok Team Work ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက် ရုံးတွင်းတင်မက၊ အပြင်မှာပါ အုပ်စုလိုက်ကြီး လျှောက်လည်လိုက်၊ စားလိုက်၊ သောက်လိုက်နဲ့ (၇)ဂဏန်းတစ်စု တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာတယ်။
အဲလိုနဲ့ အဲလိုနဲ့.. ကာလတွေရွေ့လျားတော့ တကယ်အလုပ်တွေလည်း လုပ်ရပြီ။ အသင်းတွေလည်း ဟိုဒီထပ်ပြောင်း၊ လူတွေလည်း ဟိုစားပွဲရောက် ဒီစားပွဲရောက်။ တရုံးရုံးနဲ့ အားလုံးရင်းနှီးလာကြတဲ့အထဲ ဂွကျကျသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ပါကိုပါလာတော့တာပေါ့။ တကယ်က စိတ်ရင်းလည်း ကောင်းသလို၊ တကယ်ကို ကိုးလိုးကန့်လန့် လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတုယူစရာ အရည်အချင်းအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ တကယ်လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ၂နှစ်အတွင်း ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင်၊ နောက် မန်နေဂျာအဆင့်အထိ ရောက်ပြီး သူ့အရည်အချင်းတွေ ပြနိုင်ခဲ့တာပေါ့။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာရော။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပါ ကျွန်မ သူ့ဆီက သင်ယူခဲ့ရတာတွေ အများကြီး။ ကျွန်မအတွက်တော့ သူဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်။ သူ့ဆီက အားအကျဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ် ရဲရဲကြီး လုပ်ရဲတာရယ်။ ကျွန်မမှာ မရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေအပြည့်ရှိတဲ့ လေးစားအားကျနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဆုံဖူးသည်ပေါ့။
အဲဒီကောင်မလေးကိုတော့ အလုပ်မ၀င်ခင် သင်တန်းတက်စဉ်ကာကတည်းက မျက်မှန်းတန်းမိတယ်။ မှတ်မှတ်ထင်ထင် စ စကားပြောဖူးတာက… တစ်ရက် သင်တန်းသားတွေကို သင်တန်းကအပြန် အလုပ်က ပြောပြစရာရှိလို့ ဆိုပြီး စုခိုင်းတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လိုဂိုဒီဇိုင်းဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နောက်ဆုံးရက်။ ပြိုင်မယ့်သူတွေက ပြိုင်ပွဲဝင်လိုဂို အပ်ရတော့မယ့်ရက်ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ ဒီဇိုင်းဆို ဖိုတိုရှော့ ဖွင့်တာတောင် မဖြောင့်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ စိတ်ဝင်တစားရှိမနေဘူး။ အဲဒီနေ့ သင်တန်းက အပြန် စုခိုင်းတဲ့နေရာကို ၅ယောက်လား ၆ယောက်လားမသိ တူတူသွားဖြစ်တယ်။ မနက် ၇နာရီက ၉ခွဲအထိသင်တန်းမှာနေပြီး မနက်စာ မစားရသေးတဲ့လူပဲ များနေတော့ မုန့်ဟင်းခါးအရင် ၀င်စားမယ်လည်း ဆိုရော၊ အဲကောင်မလေးက သူမစားဘူး သွားနှင့်မယ်တဲ့ဆိုပြီး သူတစ်ယောက်တည်း အရင်လမ်းခွဲသွားတယ်။ ကျွန်မက အော် မစားလည်းထိုင်လိုက်တာမဟုတ် စောသေးတာကိုလို့ တွေးမိရုံ။ စားပြီး အခန်းထဲရောက်တာတောင် စောသေးတာကိုး။ အခန်းထဲရောက်လည်း ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့နေတုန်း မီးပျက်သွားတယ်။ နေ့ခင်းကြီးပေမယ့် အလင်းရောင် မကောင်းတော့ မီးမရှိတာနဲ့ မှောင်ကျသွားရော။ အဲဒီကျမှ အခန်းထောင့်မှာ အမ်ပီဖိုးတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဟိုကောင်မလေးကို သတိထားမိတယ်။ မှောင်ထဲမှာတောင် အမ်ပီဖိုးကြီးကြည့်နေတာကို တွေ့မှ။ အာ.. သူလိုဂို ပြိုင်မလို့ဘဲ။ ဘယ်လိုကြောင့် ဒီလိုဒီဇိုင်း၊ ဒီကာလာရွေးဖြစ်တယ် စသဖြင့်ပါ ရေးပေးရမှာကိုး။ ကောင်မလေး မရေးရသေးဘူး ထင်ပ။ အဲလိုနဲ့ သတိထားမိသွားတယ်။
ကျွန်မထက် တစ်လနောက်ကျပြီး အလုပ်ဝင်လာပြီး၊ ကျွန်မတို့ စားပွဲတစ်ဝိုင်းထဲ ထိုင်ဖြစ်တဲ့ တစ်ညနေ။ အချင်းချင်း ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့။ ဥာဏ်သုံးတွက်ရတဲ့ သင်္ချာ ပဟေဌိမေးခွန်းတွေနဲ့ ကစားကြတော့။ သူမ သေသေချာချာ အာရုံစိုက်ဖြေတာ တော်တော်လေးသတိထားမိပြီး၊ အဲဒီနေရာမှာ ဥာဏ်တော်တော်ကောင်းတာလည်း သတိထားမိသွားတယ်။ ဥာဏ်ပြေးတဲ့ မိန်းမတွေကို သဘောကျတတ်တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မစိတ်ထဲ သူမကို နှစ်သက်တဲ့စိတ်က အလိုလိုဝင်လာတဲ့နေ့ပေါ့။
ကံကောင်းစွာနဲ့ သူမသည်လည်း ကျွန်မတို့ နံပါတ်(၇)အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လေတော့ တရုံးရုံးကြားမှာ တရင်းနှီးနှီးဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ အလုပ်လုပ်စရာ ကွန်ပျူတာလေးတွေ အပြည့်အစုံမရခင် ကျွန်မတွဲကြည့်ခွင့်ရတာက သူမကွန်ပျူတာနံပါတ် ၄၃။ ဟိုကလိဒီကလိ ဟိုဟာစမ်း ဒီဟာစမ်းနဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် ခံစားမိလာတယ်။
တခါမှ စိတ်တိုတယ်။ စိတ်ဆိုးတယ်။ သူများအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာ မရှိတဲ့သူငယ်ချင်း။ အသင်းတွေ ပြန်ခွဲလို့၊ သူမတစ်ယောက်တည်း ဟိုးဘက်ရောက်သွားတော့ အိမ်သာထဲဝင် မျက်ရည်ကျဖူးသတဲ့။ တကယ်ကျတော့လည်း အသင်းတွေကွဲသွားပေမယ့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့ထဲက အရင်းနှီးဆုံး၊ ကျွန်မ အယုံကြည်ရဆုံး၊ ကျွန်မဘေးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖြစ် သူမရှိနေခဲ့တယ်။ သူမဆီက အားအကျဆုံးအချက်က တကယ့်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်လေး တွေးတတ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဥာဏ်ရည်။ ဘယ်အချိန် စိတ်ဘယ်လောက် နောက်ကျိနေပစေ သူမရယ်လို့ ကြည့်လိုက်ရင် ကြည်လင်သွားစေတဲ့.. ကျွန်မရဲ့ ရေသန့်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
Team Work ဆိုတဲ့သဘောတရားကို သင်ယူမိစေတဲ့ ပထမဆုံးအဖွဲ့အစည်း။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး၊ အယုံကြည်ရဆုံး၊ အားအကျရဆုံး သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကို ကျွန်မဆီကိုပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့။ ခုချိန်ထိ ဘာမဆို အားကိုးတကြီး တိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့ အစ်မတွေ။ တတွတ်တွတ် တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုး ပေါက်ကရလေးဆယ် တနေကုန်လုပ်နေလို့ ဒီ၂ယောက်ကပ်ရင် စကားချည်းပဲလို့ ပြောရလောက်တဲ့သူငယ်ချင်း။ ခေါင်းခပ်မာမာညီမလေး။ ကြောက်သလိုလိုနဲ့ အမြဲပြန်ပြန်ပြောမိနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်။ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေကိုချည်း ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့။ ဘ၀မှာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အတက်ကြွဆုံး အချိန်ကို ထောက်ပြပါဆိုရင် နံပါတ်၇ နဲ့တူတူရှိနေတဲ့အချိန်ကို ထောက်ပြစရာကျန်နေအောင် ရခဲ့တဲ့ ကျွန်မအတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခု။
December 29, 2011 by hololodilolo	Article, friend	Leaveacomment
တချို့များကတော့ ဘ၀ကို အစီအစဉ်တကျ စီမံကိန်းတွေချလို့ ဖြတ်သန်းကြတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ဘာဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ်က ဘာလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်သင့်တယ်။ ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်မယ်။ ဒါအဆင်မပြေခဲ့ရင် ဘယ်ဟာကို အစားထိုးမယ်။ စသဖြင့် စည်းစနစ်ကျကျ စီမံကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိသလို၊ အဆင်ပြေသလိုလေးဆိုပြီး ရေလိုက်ငါးလိုက်နဲ့ ပြီးသွားကြတဲ့လူတွေလည်း တပုံတပင်ရှိမှာပါ။ ဖြစ်ချင်တာတွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်ရမယ်။ ဘာညာ မစဉ်းစားထားဘဲ ဖြစ်လာသမျှကို အဆင်ပြေသလိုဆိုပြီး နေထိုင်နေကြတဲ့ လူအမျိုးအစား။ ခပ်ညံ့ညံ့လူတွေလို့ပဲ သတ်မှတ်ကြလေမလား။ ကျွန်မကတော့ ဒုတိယလူအမျိုးအစားထဲမှာ သေသေချာချာကြီးကို ပါဝင်ပါတယ်။ စီမံကိန်းတွေ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆိုတာလည်း ကျွန်မနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာပဲ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီအရွယ်အထိ ကျွန်မလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း၊ ကျွန်မရောက်နေတဲ့နေရာ၊ ကျွန်မရွေးခဲ့တဲ့အလုပ် အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီအရာတွေအတွက် ကျွန်မ အစီအစဉ်တကျ လာခဲ့တာ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ပြောရရင် ဒီလမ်းကို လျှောက်ချင်လို့ ဒီလမ်းကို ရှာဖွေပြီး လျှောက်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ လျှောက်လာရင်းကနေ တွေ့တဲ့လမ်းထဲက ကိုယ်ထင်ရာ မြင်ရာလမ်းကို အမြဲတစေ စွပ်စပ်လျှောက်မိခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်ပေါ့။
အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း မရည်ရွယ်ပါပဲ လျှောက်မိတဲ့ ဒီလမ်းပေါ်မှာ ဒီလူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက…
ကျွန်မက လခခပ်နည်းနည်း၊ သက်တောင့်သက်သာ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မိသားစုဆန်ဆန် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လက်စ။ မထင်မှတ်ဘဲ စိတ်အားထက်သန်လှတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အဖော်လိုက်ပေးရင်း၊ နောက်ဆုံးမှာ သူလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို သူ မလုပ်လိုက်ဘဲ ကျွန်မက လုပ်ဖြစ်တော့မယ့် အနေအထား။ အလုပ်မ၀င်ခင် လိုအပ်တဲ့ ဘာသာစကားသင်တန်းတက်ရတဲ့အချိန်။ လုပ်လက်စ အလုပ်ကလည်း ထွက်ခွင့်မရသေး၊ နားလည်မှုနဲ့ပဲ အလုပ်ချိန်ကို မနက်၁၀နာရီမတိုင်ခင်ရောက်အောင် ပြေးပြေးလွှားလွှားနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးဘီ တော်တော်များများ သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ကြုံရင်ပြုံးပြအနေအထားထက်ပိုပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်မ၀င်စားနိုင်ခဲ့ဘူး။
တစ်နေ့။ အလုပ်မ၀င်ခင် လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေလုပ်ဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးခန်းကို သွားရမယ်လို့ သိထားတဲ့နေ့။ မထွက်ရသေးတဲ့ အလုပ်ကနေ မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲ နေ့တ၀က်ခွင့်တောင်း။ အဲဒီမှာ ဆေးစစ်ဖို့ သွားရမယ့် နောက်ထပ် အဖော်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ရွယ်တူ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်။ တစ်ယောက်တည်းထက်စာရင် နှစ်ယောက်ကတော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်လေ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ရောက်တော့မှ နာမည်မေးမိတ်ဆက်။ အော်.. ငါ့ထက် တစ်နှစ်ကြီးပါလားပေါ့။ ငါ့ထက်တစ်လငယ်ရင် ဒါ ငါ့ထက်အငယ်၊ ငါက အစ်မ။ ငါ့ထက်တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက်ကြီးရင်တော့ ငါနဲ့ရွယ်တူပဲ ဆိုတဲ့ ကျွန်မထုံးစံအတိုင်း နင်နဲ့ငါပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ကို ကျွန်မ စသိတယ်။
တကိုယ်လုံး ဆေးစစ်ချက်တွေ လုပ်တဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မက အဆုတ်အအေးပတ်ထားပြီး ချောင်းဆိုး မပျောက်တပျောက်ကာလ၊ ဟိုကောင်လေးပုံစံကြည့်ရတာကလည်း မီးခိုခေါင်းတိုင်အလား၊ အငွေ့တလူလူ။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးစစ်ချက်ထွက်လာတော့ ကျွန်မတို့ ဓါတ်မှန်clearမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ result တူညီစွာထွက်လာပါရောလား။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်တင်ဘယ်ကမတုန်း။ ကျွန်မတို့နောက်တရက်မှာ ဆေးစစ်ခဲ့တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ကလည်း တူညီစွာပါပဲ။ အဲဒီအစ်မက သင်တန်းမှာ ကျွန်မနားထိုင်တာပါ။ သူလည်း သူ့အလုပ်နဲ့သူ၊ ကျွန်မလည်း ကျွန်မအလုပ်နဲ့ကျွန်မမို့လို့ ထွေထွေထူးထူး ရင်းနှီးတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ နောက်ထပ်တခါ လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေ ထပ်လုပ်ဖို့သွားတော့ အဲဒီအစ်မနဲ့ တူတူဖြစ်သွားတယ်။ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ၊ ဆေးတွေထပ်စစ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ resultကမှ အိုကေ သွားတော့လည်း အတူတူ။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မတို့ သောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးတွေကို စပ်စပ်စုစု လျှောက်မေး၊ သူ့ဆေးနဲ့ ကိုယ့်ဆေးတိုက်ကြည့်လိုက်တော့၊ အကုန်တူပြီး၊ ကျွန်မမှာက အိပ်ဆေးပိုတယ်။ အစ်မမှာက ၀မ်းနုတ်ဆေးပိုသတဲ့ကွယ်။ အဲဒီဆေးစစ်ချက်ကနေ အကြောင်းပြုပြီး အစ်မနဲ့ကျွန်မ စရင်းနှီးခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် နဂိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်က ထွက်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မလည်း သင်တန်းကနေ အရင်လို တက်သုတ်ရိုက်ပြန်စရာမလိုတော့မှ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာမိတော့တယ်။ ကျွန်မအနောက် ဘယ်ဘက်မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ထိုင်တဲ့ ယူနီဖောင်းဆင်တူနဲ့ နှစ်ယောက်တမ္ဘာဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်၊ ကျွန်မအနောက်တည့်တည့်မှာ ထိုင်တဲ့ စာကြမ်းပိုးပုံစံ၊ ကျွန်မထက် အသက်ကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် ကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ အစ်မတစ်ယောက်၊ ကြောင်အကြောင်းခဏခဏပြောတတ်တဲ့ ခပ်တုတ်တုတ်ကလေး တစ်ယောက်၊ အလုပ်မ၀င်ခင်ကတည်းက ထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အစ်မ၊ အစ်မနဲ့ ပြောတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်၊ အတန်းထဲမှာ ခပ်လောင်လောင် ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ သူတို့နဲ့တွဲတဲ့ ဂစ်တာတီးပုံရတဲ့ ခပ်အေးအေး ကောင်လေးတစ်ယောက်။ စသဖြင့် အနားပတ်ဝန်းကျင်က တချို့တလေကို သတိထားမိလာပါတယ်။
ထို့ထက်ပိုပြီး..။ သင်တန်းဆင်းပြီးချိန်တိုင်းမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်ကြတဲ့အလေ့အထ။ မနက်၉ခွဲ သင်တန်းဆင်းတာကနေ စထိုင်လိုက်ရင် ၁၀ခွဲ ၁၁မှ ပြန်ဖြစ်ကြရင်းကနေ ကျွန်မအတွက် မှတ်မှတ်ရရ လူနှစ်ယောက်ကို ကျွန်မဆီရောက်လာစေခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ အကြိုက်မတူ၊ စရိုက်မတူ၊ အကြိုက်တူ၊ စရိုက်တူ၊ သူ့အားကျ၊ ကိုယ့်အားကျ မျိုးစုံနဲ့ ရှိကြတယ်လေ။ ကျွန်မအတွက် သူငယ်ချင်းတိုင်းက ခင်မင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ တချို့တွေဆီမှာ သဘောကျတဲ့အချက်၊ မကြိုက်တဲ့အချက်တွေ ကျွန်မက သတ်မှတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါတွေက သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မ ခင်မင်မှုပေါ်မှာတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ လုံးဝမကြိုက်တဲ့သူလည်း ကျွန်မနားမှာ ကျွန်မအရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်သလို၊ ကျွန်မချစ်တဲ့သူလည်း ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ တချို့သူငယ်ချင်းတွေဆီက ကျွန်မအားကျတဲ့ အချက်လေးတွေကို သတိထားမိတတ်တယ်။ အားကျတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူတို့လိုကြီး ဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးတော့လည်း မရှိပြန်ဘူး။ ဒီအတိုင်း အားကျရုံလေးပဲ။
ဆေးစစ်တာကနေ စပြီးသိခဲ့ကောင်လေးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံနဲ့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြ၊ စကားတွေပြောကြရင်းမှ သူ့ခေါင်းထဲက ထူးခြားတဲ့အတွေးအခေါ်တချို့ကို အသိအမှတ်ပြုဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းစာအုပ်တွေကို အရမ်းဖတ်ချင်နေတဲ့အချိန် သူ့ဆီက တော်တော်များများ ငှားဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူ့ဆီက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့အချစ်၊ လက်တွဲဖော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒသနလေးကလည်း ကြားတုန်းကသာ ဘာမှမထူးခြားတာ တကယ်ကို လက်ခံနိုင်စရာ၊ ခုထက်ထိ မှတ်မှတ်ရရရှိနေတုန်း။ နောက်အလုပ်ဝင်ကြတော့ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ။ ဘယ်တော့မှ ပျာယာမခတ်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာ။ တခါတခါ ပျင်းရိပျင်းတွဲ။ ကျွန်မအားကျတဲ့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အချက်က သက်တောင့်သက်သာရှိမှုပဲ။
အစ်မဆီက ကျွန်မအားကျတာကတော့ အစ်မရဲ့ ရဲရင့်မှုနဲ့ ပြတ်သားမှု။ ဘယ်နေရာမဆို ကိုယ်လုပ်ချင်တာပဲ ကိုယ်လုပ်ပြီး၊ ဘာမဆို ပြတ်သားစွာ ပြောရဲတာ။ ဆေးစစ်ရာကနေ အလုပ်မ၀င်ခင်စပ်ကြား၊ နောက် အလုပ်ဝင်ပြီးတဲ့အထိ အစ်မနဲ့ကျွန်မတတွဲတွဲရှိခဲ့ကြတယ်။ ပျော့ညံ့ညံ့ကျွန်မကို ဆူဆူပူပူ၊ တွဲတွဲထူထူနဲ့ အစ်မ၊ အစ်မကြောင့် သိခဲ့ရတာတွေလည်း အများအပြား၊ ကျွန်မနား အစ်မမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလည်း အားငယ်တဲ့အချိန်၊ မပြတ်မသားဖြစ်တဲ့အချိန် မကြာခဏဆိုသလို အစ်မလို ဇွတ်တရွတ်ဆန်ဆန် ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်တတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး တောင့်တောင့်တတနဲ့ အစ်မကိုခဏခဏ လွမ်းတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီလိုပဲ… ရုတ်တရက် အနားရောက်လာလိုက်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာလိုက်၊ ဖျတ်ခနဲ ပြန်ထွက်သွားလိုက်၊ မသိမသာဝေးကွာသွားလိုက်နဲ့ ပုံစံစုံ၊ အသွင်စုံလူတွေကြား၊ စွဲစွဲထင်ထင်လူတချို့၊ အားကျစရာလူတချို့၊ အမှတ်တရခပ်များများနဲ့.. ဒီလမ်းပေါ်ဆက်လျှောက်ဆဲ..
October 12, 2011 by hololodilolo	about me, friend, story	1 Comment
October 1, 2011 by hololodilolo	friend, poem	3 Comments
မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း
give ချည်းပဲ ဖြစ်နေတော့မှာလား
ဘယ်အရာမှ နင်တယောက်တည်း တာဝန်ယူနေစရာမလိုပါဘူး။
အဲဒါကလည်း အလူးအလဲဆိုတော့ နင်ထိခိုက်ပြီလေ
အဲဒါ နင်လျှောက်တဲ့ လမ်းမဟုတ်ဘူးလေ။
နင်က မရဘူး ထင်နေပေမယ့်
တခါတလေ အဲဒါတွေက နင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားတွေ
အမှုတွဲလေးလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါစေ။ ။
August 10, 2010 by hololodilolo	friend, poem	Leaveacomment
လောကကြီးထဲ ငါသိတဲ့ နာမည်တိုးလာရုံ။
ငါ့အတွက် energy drink။
May 13, 2010 by hololodilolo	friend, poem	7 Comments
အလုပ်မလုပ်ဘဲ ကျွန်မမျက်နှာထိုင်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ရေးပေးထားတာ။ ဂုဏ်ပြုကဗျာဆိုလား။ ဒီမှာ လာတင်တာသိရင် ရှက်ပြီးသေမလား.. တက်ပြီးသေမလားဘဲ.. ။ ဒီတော့ ရှူး…….. တိုးတိုး…. တိတ်တိတ်ကလေး ဖတ်သွားကြ။
အရူးမရေ အရူးမရေ ခပ်ပြုံးပြုံးလိုက်ခေါ်ရင်း
March 23, 2010 by hololodilolo	about me, friend	6 Comments
March 2, 2010 by hololodilolo	friend	Leaveacomment